Tany malalaka Antaniavo : Tsy namidy fa an’ny Faritra Analamanga -
AccueilSongandinaTany malalaka Antaniavo : Tsy namidy fa an’ny Faritra Analamanga
Tany malalaka Antaniavo : Tsy namidy fa an’ny Faritra Analamanga
21/02/2018 admintriatra Songandina 0
Nanambara ny teo anivon’ny Faritra Analamanga tamin’ny alalan’ny lehibeny, Ndranto Rakotonanahary, fa diso avokoa ny vaovao navoakan’ny haino aman-jery iray, Viva, mahakasika ny fivarotana ny tany malalaka eo Antaniavo, akaikin’ny EPP.
Raha ny vaovao navoakan’ny Viva mantsy, dia nilaza izy ireo fa namidin’ny Faritra Analamanga tamin’ny Sinoa io tany malalaka io, ka nahatonga ny fanesorana sy fanakanana ireo tanora tsy hilalao baolina eo intsony.
Nilaza avy hatrany, ny avy amin’ny Faritra Analamanga fa tsy marina ilay vaovao nivoaka tamin’ny Viva satria azy ireo, ary fananan’ny Faritra io tany. Noho izany, raha ny fanazavana ihany, tsy nisy ny famarotana ny tany tamin’ny Sinoa.
“Mbola tsy manana trano azy manokana ny Faritra Analamanga. Noho izay indrindra, noheverina fa eo amin’io tany io no hananganana ilay Tranoben’ny Faritra sady birao fiasana. Hita ihany koa fa mihasimba ilay tany amin’ilay hanaovan’ny tanora baolina, sns. Raha toa ka tena misy izany, tokony hamoaka porofo izy ireo fa namidinay io tany malalaka eo Antaniavo io”, hoy ny lehiben’ny Faritra Ndranto Rakotonanahary.
Notsindrian’ity laharana voalohany eto amin’ny Faritra Analamanga ity hatrany fa efa ao anatin’ny fandaharan’asa sy tetikasan’izy ireo ny hanangana fotodrafitrasa ho azy ireo. Marihina mantsy, raha ny fanazavana, fa mbola tsy manana trano fiasa ho azy manokana toa ireo Faritra hafa eto Madagasikara ny Faritra Analamanga. Izay no antony nangalana io tany eo Antaniavo io.
Ankoatra izay, efa nisy kosa ny fifampiresahana teo amin’ny fokontany Antaniavo sy ireo tanora mpilalao eo amin’ilay tany malalaka amin’ny hijerena izay marimaritra iraisana. Izany hoe, raha ny voalaza, mety hanokanana ampahan-tany amin’io tany malalaky ny Faritra Analamanga io ihany izany ireo tanora, hilalaovany sy hanaovany fanatanjahantena.